Vaovao - Ahoana no hanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny bisikileta amin'ny fomba mahomby
Fantatrao ve ny antony fototra vitsivitsy izay misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fiara?
Matetika ve ianao mahatsapa fa tsy dia haingana ny dia ary tsy ampy ny fotoana fandehanana?
Mitovy na latsaka kely ny traikefa mitaingina sy ny haben'ny mpitaingina, nahoana ny hafa no afaka mitaingina haingana, sarotra be ny tratrany
Satria ve tsy tsara ny bisikileta?Ka tsy afaka mitaingina haingana ianao?
Raha ny marina, ankoatra ny hozatrao manokana, ny fiasan'ny cardiopulmonary ary ny toe-batana hafa, ny bisikileta mihitsy dia hisy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fiara.
1.Frame, bracket ambany
Ny hamafin'ny frame sy ny bracket ambany dia tena zava-dehibe, ary ny hamafin'ny frame dia tsy mitovy, fa izany fahatsapana izany dia tsy ho tsapa raha tsy rehefa tena haingana ny hafainganam-pandeha, ary ny bisikileta dia mihozongozona mafy na rehefa mandalo haingana ny bisikileta.Tsy tsapa amin'ny hafainganam-pandeha ambany dia ambany.Ny bracket ambany dia hikorontana rehefa mandeha mafy.Raha mafy be ny bracket ambany, dia mahalana no hamoaka ny hery.Ny herinao dia azo ampitaina amin'ny lamosina tsara, fa tsy ny ampahany amin'ny elasticité ny bracket ambany.Noho izany, raha atao tsara ny bracket ambany, dia ho mora ny mitaingina ny frame, izany hoe, matetika isika no milaza fa ny kodia aoriana mahatsapa matanjaka aorian'ny daka.
2. Ny kodiarana
Raha ny marina, na mitaingina fisaka, miampita firenena na mitambatra, dia tiantsika ny hanana an'io toetra io ny kodiarana: ny maivana kokoa ny axe ao anatin'ny lanjany iray, ny tsara kokoa, ny lanjan'ny kodia dia mifantoka araka izay azo atao any ivelany. faribolana.Noho izany, ny inertia ny faribolana dia tsara kokoa amin'ny hafainganam-pandeha mitovy, ny kely mety hampihena ny hafainganam-pandeha.
Ny sasany amin'ireo kodiarana maivana indrindra dia tena mamaly, ny hery haingana, fa raha vao mijanona ny pedaling, ny hafainganam-pandeha dia mazava ho azy fa very, ary vetivety dia miadana, izay no mahatonga indraindray ny wheelset maivana fa tsy mavesatra mihazakazaka haingana, stable.
Raha ny marina, ankoatra ny toe-javatra misy azy ireo ary ny fiara dia mety hisy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandeha, ny fiantraikany lehibe indrindra amin'ny hafainganam-pandehan'ny anton-javatra ivelany dia ny fanoherana.
1. Ny fanoherana ny rivotra
Ny fanoherana ny rivotra no tena fanoherana, ary arakaraka ny fandehananao haingana no hahatohitra ny rivotra.Amin'ny ankapobeny dia tsy mihoatra ny 40km/ora ny hafainganam-pandehantsika mahazatra.Amin'izao fotoana izao, ny 80% amin'ny fanoherana amin'ny fiara dia avy amin'ny fanoherana ny rivotra.Tsy azo resena io fanoherana io raha tsy mandeha ao anaty banga isika.Saingy azontsika atao ny mampihena kely io fanoherana io amin'ny fomba sasany.
Ohatra, manao akanjo mifanentana tsara fa tsy malalaka be.Amin'ny fifaninanana matihanina, indrindra amin'ny fitsapana ara-potoana tsirairay, dia hitantsika fa ny akanjon'ny mpilalao dia miraikitra mafy amin'ny vatana, ary misy dimples amin'ny akanjo mitovy amin'ny eny ambonin'ny baolina golf, izay ampiasaina rehetra hanamaivanana ny rivotra. fanoherana.Mazava ho azy fa tsy mila matihanina toy izany ny akanjo am-bisikileta, fa manao akanjo mafana kokoa.
Ny tadin'ny rivotra amin'ny fiara dia avo loatra ka matetika ny hazakazaka am-bisikileta amin'ny lalana dia mitazona izany fiomanana izany amin'ny ankamaroan'ny fotoana.
2. Mihodinkodina fanoherana
Ny fanoherana mihodinkodina dia ny fifandonana eo amin'ny kodiarana sy ny tany.Eto, ny fitondran-tena mitaingina amin'ny lalana fisaka ihany no raisinay.Ny kodiarana tery kokoa dia mety hampihena ny faritra mifandray amin'ny tany, ary ny kodiarana maivana kokoa na ny kodiarana sola aza dia mety hampihena ny fifandonana amin'ny tany., Ireo teboka roa ireo dia afaka mampihena ny fanoherana ny fihodinana ary manamora ny fandehanana.Mazava ho azy, ny safidy ny kodiarana dia miankina amin'ny tontolo iainana, raha eny an-dalana, dia raharaha hafa.
3. Ny fanoherana ny bisikileta mihitsy amin'ny lafiny rehetra
Ny teboka farany dia ny fanoherana ny lafiny isan-karazany amin'ny bisikileta mihitsy, toy ny axle telo tsy manosotra, rojo maina ary tsy fahampian'ny menaka na harafesina mihitsy aza, fikosoham-bary amin'ny sisiny na fikosoham-bary amin'ny disc, sns. Ireo fanoherana ireo. azo vahana amin'ny fanosorana menaka fanosotra sasany.
Na dia manantitrantitra hatrany ny fiantraikan'ny hafainganam-pandeha sy ny fomba hampitomboana azy aho, amin'ny tena fiainana dia tsy maintsy milamina aloha ny zava-drehetra, fa tsy ny isan'andro no hazakazaka.Mitaingina soa aman-tsara, mitaingina amim-pifaliana!
Fotoana fandefasana: Aug-31-2021